China anatomical orbital n'ala efere factory na-emepụta | Shuangyang
Nhazi pụrụ iche maka trauma na nwughari nke orbit, iji weghachite ụdị anya na ọrụ anya.
• dị ka mmebe nke orbital n'ala na orbital mgbidi Ọdịdị imewe, zere oghere optic na akụkụ ndị ọzọ dị mkpa
• anatomi, lobulated design, ka o kwere mee iji belata ọrụ nke na-akpụzi, na-eweghachite ọkpụkpụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ dị n'ihu, na-echekwa oge ọrụ, belata trauma ịwa ahụ, obere postoperative nsogbu.
• Mgbidi orbital dị ala dị mkpa dị ka akwụkwọ, ya mere, na-ejigide ebe siri ike n'azụ nke ntupu ala titanium mesh. Nyere aka ịtọgharịa anụ ahụ anya na abụba eji eji, weghachi olu oghere ma ọ bụ mmegharị anya, meziwanye ọnụ ọgụgụ anya na diplopia.
φ1.5mm nyocha nke onwe
obe isi ịghasa ọkwọ: SW0.5 * 2.8 * 75 / 95mm
Na anatomi, orbit bụ oghere ma ọ bụ oghere nke okpokoro isi nke anya na ihe mgbakwunye ya. "Orbit" nwere ike izo aka na ọkpọ ọkpọ. Olu nke orbit na okenye okenye bụ mililita 30, anya nwere ngụkọta 6.5 ml. Ihe ndị dị n'ime ya gụnyere anya, orbital na retrobulbar fascia, akwara extraocular, irighiri akwara, akwara ọbara, abụba, lacrimal gland na akpa ya na akwara, nku anya, akwara na akụkụ akwara, na-elele njikọta, akwara nkwonkwo, septum , ciliary ganglion na irighiri akwara ciliary.
Okirikiri a na-enwe ọdịdị conical ma ọ bụ oghere pyramidal dị anọ, meghee ihu ihu etiti wee tụọ isi ahụ. A isi, onu ire na mgbidi ano mebere uzo obula.
Okpukpo aja nke uzo uzo nke ndi mmadu bu ihe omuma nke uzo asaa nke embrayo di iche iche, nke nwere okpukpu zygomatic na akuku, okpukpu sphenoid, ya na nku ya nke na-eme akwara uzo na nku ya nke na-eme ka uzo nke ngba , ọkpụkpụ maxillary na-adịchaghị ala ma na-atụgharịkwa anya nke, yana lacrimal na ọkpụkpụ ethmoid, na-etolite mgbidi dị n'etiti nke orbital canal. Mkpụrụ ndụ ikuku ethmoid dị gịrịgịrị, ma nwee ụdị ihe akpọrọ lamina papyracea, ọkpụkpụ ọkpụkpụ kachasị njọ na okpokoro isi, na otu n'ime ọkpụkpụ ndị kachasị agbaji na trauma orbital.
A na-emepụta mgbidi dị n'akụkụ site na usoro nke zygomatic na nke ọzọ site na mbadamba mbata nke nku ka ukwuu nke sphenoid. Ọkpụkpụ na-ezukọ na suture nke zygomaticosphenoid. Mgbidi dị n'akụkụ bụ mgbidi kasị sie ike nke orbit, ọ bụ ebe kachasị ekpughere, ya mere ọ dị mfe iji zute oke mmerụ ahụ.
Mgbaji mgbidi na-adịghị mma bụ mgbawa kachasị na-agbaji na mgbaji agbaji agbaji, nke na-ebutekarị nsogbu dị ka nsị nke enophthalmic, nsogbu mmeghari ahụ nke mbu, diplopia na mgbapu ocular, nke na-emetụta ọrụ na ọdịdị. Maka mgbaji ọkpụkpụ agbaji agbaji, a ga-arụ ọrụ ịwa ahụ ozugbo enwere ike mgbe ọnya intraocular karịrị 2mm na mpaghara mgbaji ahụ buru ibu karịa ka CT gosipụtara. Na mmezi nke mgbaji ọkpụkpụ, ihe ndị a na-ejikarị eme ihe na-agụnye ọkpụkpụ hydroxyapatite, ọkpụkpụ polyethylene polymer sịntetik, ihe hydroxyapatite na titanium metal. Maka orbital idozi ịkụbanye ihe onwunwe, ezigbo ịkụbanye ihe kwesịrị inwe àgwà ndị a: ezigbo ndakọrịta ndu, dị mfe ịkpụzi ma tinye ya n'akụkụ akụkụ nkwarụ orbit, na-enwe ike idigide ọdịdị ya nkwado orbital ọdịnaya iji nọgide na-enwe ọnọdụ anya nkịtị, nwere ike dochie efu nke orbital ọdịnaya ma saa mbara ma ọ bụ olu oghere, olu CT nkwalite iji kwado postoperative chọpụtara. Ebe ọ bụ na ntaneti ntupu dị mfe ịkpụzi ma nwee ezigbo ndozi, ọ nweghị mmetuta, carcinogenesis na teratogenicity na kọntaktị na ahụ mmadụ, ọ nwere ike ijikọta ya na anụ ahụ ọkpụkpụ, epithelium na anụ ahụ jikọrọ ọnụ, yabụ, ọ bụ ngwongwo kachasị mma na biocompatibility .
Emebere preb Orbital plate si na CT scan data. Efere ndị a nwere ihe ndị e ji arụ ọrụ nke na-eme ka ọdịdị ihu ala nke ala mmadụ na mgbidi dị n'etiti ma bụrụ nke a chọrọ iji mee ihe na trauma craniomaxillofacial. Akụkụ akụkụ atọ dị iche iche: Ezubere maka obere ịgbanye na igbutu nke na-ebelata oge achọrọ maka efere contour. Contoured efere n'ọnụ: N'ihi na mfe efere ntinye site anụ mbepụ na obere nnyonye anya n'etiti efere na gburugburu adụ anụ ahụ. Nkesa nkewa ： Iji hazie efere iji lebara ọdịdị ihu ala ma ọ bụ iji hụkwa mbadamba efere contoured nwere obere nkọ. Mpaghara siri ike ： Na-eweghachi ọdịdị ahụ n’azụ ala ma ọ bụ gburugburu iji kwado ọnọdụ ziri ezi nke ụwa. azịza zuru oke maka ịrụzi ụlọ na nwughari ala ụlọ.
Nke gara aga: 2.0 mkpọpu ala nke onwe
Osote: maxillofacial trauma micro X efere
mkpọchi maxillofacial mini arc plate
orthognathic 0.8 genioplasty efere
mkpọchi maxillofacial mini 90 Celsius L efere
maxillofacial trauma micro acr efere
anatomical titanium ntupu-3D ígwé ojii udi
maxillofacial trauma mini 90 Celsius L efere